ULWAZI - I-Sicily Tourism
Lapha uzothola ulwazi ngohambo lwakho olulandelayo oluya eSicily. Ongakubona, okufanele ngikwenze, kanjani ukuya eSicily. Amathiphu okuthi ungakhetha kanjani ukuthi uzohlala kuphi ngokukhetha Kwezindawo Zokulala.
I-Sicily nesikhundla sayo enhliziyweni yeMedithera sekuyisikhathi eside iyindawo lapho amasiko ehlukene ahlangana khona futhi kuchuma impucuko..
Zonke izakhamuzi ezingomakhelwane sezidlule eSicily ngokushesha noma kamuva: abaseFenike, AmaGreki, AmaRoma, Ama-Arabhu, French, AbaseSpain, AmaNtaliyane (Yebo! , nabo babengabahlaseli ..). Ngisho namaMelika ahlasela muva nje phakathi neMpi Yezwe Yesibili. Ngokuvumelana nomlando wakhe iSicily namuhla iyikhaya labantu bokufika abaningi abavela eNyakatho Afrika, E-Albania, Romania nakwamanye amazwe. Kusukela i-European Union abambalwa baseNyakatho Yurophu bathuthela lapha.
I-Sicily kancane kancane iba yiCalifornia yase-USA.
Okuheha abantu lapha yisimo sezulu esihle, ubungane baseSicilia, ukudla okuhle kakhulu, ubuhle bemvelo, izakhiwo zezakhiwo ezisukela emasontweni e-baroque kuya emathempelini amaGreki. Bambalwa abazi ukuthi kunamathempeli amaGreki amaningi lapha eSicily kunaseGrisi. Ngokusobala amaGreki asendulo ashiya izwe elinezintaba njengeGrisi aye akhetha okungcono kakhulu: eSicily! Nanamuhla, izakhi zabo zofuzo zisaphila kwamanye amaSicilia anamuhla. Lesi sizindalwazi silapha ukuze sikusize uhlele iholide lakho e-Sicily futhi singakuciki ngomlando waseSicily. Uma unentshisekelo ku-archeology e-Sicily ungase ufune ukuhlala lapha unomphela. ISicily iyisiqhingi esikhulu esizungezwe iziqhingi eziningi ezincane. Ngakho xwayiswa: Uma ufika isonto lonke ngeke ukwazi ukuyivakashela yonke. Futhi asizicabangeli ngisho neziqhingi ezincane zaseSicily. Leli sayithi lihlose ukukusiza ukuthi uthole izindawo ezingaxhashazwa ukuvakasha kwabantu abaningi
Ngifuna Ukuvakashela eSicily? Qala ukuhlola i- I-Southern East ithiphu ye-Baroque Sicily Ragusa Ibla kanye ne-Riviera
Ungakhohlwa ukuvakashela amanye amakhasi esayithi like lapho yokuhlala ukuze uthole izeluleko namathiphu.
Sesha amahhotela nokuningi...
NgoLwesithathu 29 Jun 2022
Qoqa 30 Jun 2022
Imigomo kanye nenqubomgomo yemfihlo
© 2022 I-Sicily Tourism	| Inikezwe amandla yi Izindikimba ezivelele